"Humni Addaa Oromiyaa gaachana ummata Oromoofi biyya keenyaati"-PMNO Obbo Shimallis Abdiisaa - ETHIOPIANS TODAY
May 9, 2021 Oromia Special Force
Koolleejjiin Poolisii Oromiyaa poolisoota Humna Addaa Oromiyaa leenjisaa ture guyyaa har’aa eebbisiisee jira.
Sirna eebichaarratti Pireezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa taasisaniin akka jedhanitti; gootni of caalaa aarsaa kaffaluun biyya isaaf halkaniifi guyyaa dadhabe osoo hin jedhin hojjeta.
Osoo Humni Addaa Oromiyaa aarsaa hin kaffalle ta’ee naannoon keenyaafi biyyi keenya rakkoo hamaaf saaxilamti ture. Ummanni goota qabu seenaa, galma, abdiifi hawwi qaba jedha.
Humni Addaa Oromiyaa gaachana ummata Oromoofi biyya keenyaati gaafa jennu gareen farreen nageenyaa hawwii biyya diiguufi nageenya booreessuu isaanii galmaan gahachuuf yoo yaalaniyyuu kayyoon isaanii akka galma hingeenye Humna Addaa Oromiyaatu aarsaa kanfaluun mirkaneesse jedhaniiru Pireezidaanti Shimallis.
Humni Addaa Oromiyaafi Poolisoonni Oromiyaa daran haqummaa mirkaneessu, olaantummaa seeraa kabachiisuufi diimokiraasii diriirsuuf hojjechuu akka qabanis hubachiisaniiru.
Humni Addaa Oromiyaa kana caalaa kayyoofi ergamasaa galmaan gahachuu akka qabu waamicha dhiyeessaniiru.
Mootummaan Gibxi ergamoota isaa erguun kallattii garaa garaan hojjechaa jira garuu hawwiin isaanii galma gahuu hindanda’uu himaniiru.